Deg Deg::Itoobiya Wada Qorshe Halis Ku ah Somalia | khaatumonews
Deg Deg::Itoobiya Wada Qorshe Halis Ku ah Somalia
Jul 11, 2018 - 3 Aragtiyood
Warar hoose oo ay heleyso WKhaatumonews ayaa sheegaya in Dowlada Itoobiya ay si hoose ula shaqeyneyso Imaaraadka Carabta, iyadoo qeyb ka siineysa dhismaha iyo Maalgalinta Mashaariicda Afarta dekadood uu saxiixay Madaxweyne Farmaajo.
Itoobiya ayaa qaadatay Mashruucaan dib loogu dhisayo Dekadaha dalka, iyadoo Dhaqaalaha ku bxaya la kaashaneysa Dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga, waxaana warar hordhac ah oo la helayo ay sheegayaan in qeybta ugu badan ay ku wareejineyso labadaas Dowladood.
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa lagu wadaa inuu safar ku tago dalka Sacuudiga, isagoo arrimaha ku saabsan dalkiisa markuu kala hadlo sidoo kalena hordhigi doono in Itoobiya iyo Sacuudiga ka shaqeeyaan soo celinta Xiriirka xumaaday ee Soomaaliya iyo Imaaraadka.
Sidoo kale wuxuu kala hadli doonaa sidii mashriicda lagu dhisayo dekadaha Soomaaliya ay iskaga kaashan lahaayeen Sedexdooda Dowladood.
Dowlada Soomaaliya ayaa Itoobiya u ogolaatay inay maalgaliso afar dekadood, iyadoo la og yahay in Itoobiya kaligeed aysan ku filneyn dhaqaale ahaan dhismaha afartaas dekad.
heshiis ay Itoobiya hor boodayso laakiin ay ku wada dhanyihiin dawladahaa aan soo xusay. Dawladii kastaa waxay mashaariicdaa ka qaadan kartaa inta ay awoodi karto laakiin wxa khasab ah in mashaariicda la wada galo oo la wada shaqeeyo.
heshiis ay Itoobiya hor boodayso laakiin ay ku wada dhanyihiin dawladahaa Somaliland, Imaaraadka carabt iyo Saudi Arabiya ayaa dhawaan lagu saxeexay Addis Ababa. Dawlad kastaa waxx loo ogolyay in ka qaadato mashaariicdaa inta ay dhaqaale ahaan awoodi karto laakiin waxa khasab ah in mashaariicda la wada galo oo la wada shaqeeyo sida warbixinta sirta ah lagu shaaciyay.
laba wadan oo aan heshiis ahayn oo midi mida kale dekedo u dhisayso maanaa mindiyo lay qarshaa laygu qali doono